Mitambo yakanakisa ye iPhone [31/5/2015] | IPhone nhau
Kune akawanda akanaka mitambo pane ese mapuratifomu, angave ari desktop desktop, makomputa, anotakurika ekunyaradza uye, zvokwadi, kune mafoni. Izvo zvinoitika kazhinji ndezvekuti hatizive kuti ndeapi mitambo akakosha, uye iro idambudziko, kunyanya kana mitambo yatiri kufunga nezvekutenga yakabhadharwa. Muchikamu chino ticha kurudzira mitambo 8 ichaita kuti uve nenguva yakanaka, pasina kupokana.
1 Chaos Rings 3
2 Kushungurudza fandango
4 Bhora King
5 Earthcore: nokupwanya Elements
6 The Last Warlock
7 Digit & Dash
8 Geometry Hondo 3: Zviyero
Chaos Rings 3 ndeye RPG yakagadzirwa na Square Enix. Kufanana neva protagonists emitambo yapfuura, icho chisikwa chakaburitswa kunze kwechimiro, chiri kutambura kuti chiwane kukosha mune inochinja nyika inopa mashoma tsitsi. Tichatanga munzira inozoshanduka isu tichifambira mberi kuburikidza nemutambo. Kufanana neese maRPG, mavara anozochinja kuti arwise vavengi vanowedzera simba.
Imwe yeakanakisa graphic adventures ePc ikozvino muchanza cheruoko rwako. Uyu mutambo unoitika muNyika yevakafa uye pane protagonist iri ... dehenya harifanirwe kuda kuiswa. Mutambo wacho wakanakira dingindira rawo, asi usatarisira mifananidzo yakanaka kwazvo pasi, kunyangwe mutambo uchidzokororwa, sezvo uri mutambo wa1998.
Kune vanhu vakaita seni, vane sevana vaive ne8-bit koni, mitambo yepuratifomu ichiri nerunako rwavo (ini ndine vese emulators pane yangu Mac). Drylands inovimbisa kubatanidza mapuratifomu ine nhoroondo uye shanduko yeiyo RPG mune imwechete zita. Uye zvinoita sekunge zvinobudirira.
Nekuti mutambo wakanaka haudi giraidhi yakakwana kana nyaya dzakaomarara. MuBall King isu tichafanirwa chete kudhonzera bhora mumabhasikiti anotenderera nguva dzese dzatinonamwa. Mune dambudziko nzira tichafanira kuona mangani mabhasikiti atiri kukwanisa kuisa mukati pasina kukundikana. Zvinhu zvinoomera kana mhepo yaonekwa. Mune iyo nguva yekuyedza modhi isu tichafanirwa kunwisa mapoinzi akawanda sezvatinogona. Zvinodhakwa.
Earthcore: nokupwanya Elements
Mutambo wekadhi haugone kushayikwa kubva pane urwu runyorwa. Earthcore: Shattered Elements mutambo wedhijitari kadhi ine mikana isingaperi yematanho ayo anoedza pfungwa dzedu, kufunga kwedu kwakarongeka. Iyo ine mamwe mavara anokwezva uye mamwe mazano akasarudzika anoita kuti Earthcore ive yakasarudzika CCG, ichipa inonakidza system yehondo uye akawanda akasiyana maficha, pamwe neakawanda multiplayer modhi. Mutambo hauna kukwana sezvo paine dzimwe nyaya nemamaki dhizaini uye yakazara ruvara palette, asi zviri pachena.
Haufanire kutsvaga zvakawanda zvine musoro mumutambo uyu. Mune Yekupedzisira Warlock isu tichafadzwa nerusununguko rusina musoro maererano nekuzadzisa zvinangwa zvedu. Tinogona kusvika pamusuwo kudzinga muvengi kana isu tinogona kujoina navo kurwira vasingabvumirane wechitatu bato, hongu. Tichishandisa zvinhu zvatinoona kugadzira grenade, kukwira nzou ... mutambo unotipa rusununguko rwekugadzira zano redu uye kurarama yedu yega nyaya.
Digit & Dash iri «risingaperi kumhanya» umo iwe unofanirwa kudzora mavara maviri, ayo pamatanho epamberi anogona kupenga. Zvinondiyeuchidza zvishoma bvunzo yavanotipa muchikoro chekutyaira, kunyangwe muDigit & Dash isu tinongofanirwa kusvetuka uye isu tine mifananidzo iri nani.
Geometry Hondo 3: Zviyero
Uye ini handikwanise kutaura zvakanaka ndisina kukurudzira, zvakare, mutambo uyu wechikepe kana wechitatu munhu shooter, chero chaunoda. Uye kwete, isu hatibhadharwe kuti tisimudzire. Zvakakosha chaizvo. Kuziva zvese nezve mutambo uyu, ita chokwadi chekushanyira yedu ongorora nezveGeometry Hondo 3: Zviyero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mitambo yakanakisa ye iPhone [31/5/2015]
Ndeipi chirongwa chandinogona kushandisa pakombuta kuisa zvirongwa zve iPhone3
Pindura kuna evelyn